Inona no hitsidika an'i Alzeria | Vaovao momba ny dia
Inona no hitsidika an'i Algeria
Mariela Carril | | Alzeria, soso-kevitra
Iray amin'ireo firenena maherin'ny 50 mandrafitra ny kaontinanta afrikanina Alzeria, tany izay niaina tamin'ny zava-drehetra nandritra ny tantarany ary, eo am-pofoanan'ireo karazan-javantsika, dia mitazona antsika harena voajanahary sy arkeolojika tena zava-dehibe.
Firenena lehibe tokoa i Algeria, misy tendrombohitra sy morontsiraka mahafinaritra, koa raha te hahalala bebe kokoa ianao dia diniho ny lasa amin'ity tany manankarena sy mahaliana ity dia tokony handeha amin'ny fiaramanidina ianao ary hahafantatra azy. Inona no azo jerena na inona no azo tsidihina any Algeria? Andao hojerena
2 Fizahan-tany any Alzeria
3 Ahoana ny fomba hivezivezena any Algeria
Amin'ny fitsipika dia tsy maintsy ekentsika fa ny anaran'i Algeria dia mifandray tsy azo ihodivirana amin'ilay Fanjanahana frantsay ary ny habibiana nataony, hatramin'ny ady an-trano tamin'ny taona 90 sy ny vidiny lafo dia 20 XNUMX ny ainy. Nefa tsy maintsy mandroso lavitra isika.
Amin'ny alàlan'ny tany Alzeriana nandalo ny Fenisianina, Romanina, Empira Byzantine, Ottoman, vahoaka piraty ary eny, ny frantsay koa. Izany no mahatonga azy io ho poti-kolontsaina mirendrika sy vavahady mankany tendrombohitra, morontsiraka ary efitra.
Voalazantsika tetsy ambony fa any Afrika izy ireo toerana arkeolojika Tena mahaliana izy ireo, noho izany dia nahita taolam-hominidana mihoatra ny roa tapitrisa taona ary koa ny Homo Sapiens. Manana koa sary hosodoko taloha sy sarobidy ary soa ihany fa voaro ao anatin'ny valan-javaboary ny zava-drehetra. Ny tiana holazaina dia hoe tafavoaka velona tamin'ny rafitra mpanjanatany frantsay ihany koa ireo harena ireo tamin'ny farany.
Ny marina dia hoe Manana toko feno rà ao Frantsa i Algeria. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia nanomboka ny fizotry ny fanaparam-pahefana tany Azia sy Afrika, fa raha ny zanatany frantsay Algeria dia tsy te-hampihatra izany i Frantsa ary noho izany dia nisy fikomiana namaritra ny fahaleovan-tena tamin'ny 1962. Milaza amintsika ny tantara fa tena nisy ra ny famoretana frantsay ary misy ireo milaza fa niafara tamin'ny famongorana ny 15% -n'ny mponina Alzeriana.
Ny tanàna manan-danja indrindra dia Alger, renivohitra. Ny ankabeazan'ny tampony dia efitra, ilay malaza Tany efitra Saharafa misy koa ala, ahitra ary faritra mando sasany. Miorina amin'ny inona ny toekarenao? Izy io dia manana solika, volafotsy, gazy ary asa fanjonoana sy fambolena marobe. Mazava ho azy, ny fon'ny toekareny dia solika ary laharana faha-14 amin'ny lisitry ny firenena manan-karena indrindra amin'ny solika.
Fizahan-tany any Alzeria
Tsy maninona na amin'ny firy taona ianao no mandeha, misy zavatra ho an'ny rehetra satria raha mandeha fahavaratra ianao ary mafana dia misy moron-dranomasina ary raha tianao ny ririnina ary maniry hahita lanezy sy ski ianao dia misy tendrombohitra. Eto an-drenivohitra dia manana vitsivitsy ianao tranombakoka naroso: Ny Bardo Museum Momba ny tantara sy ny arkeolojia ary ho hitanao ny sasany amin'ireo sary hoso-doko ao amin'ny valan-javaboary Tassili N'Aijer, any Sahara. Misy koa ny Tranombakoky ny fomban-drazana sy ny zavakanto malaza ary ny Museum nasionalin'ny zavakanto maoderina sy ankehitriny ary ny National Museum of Antiquities. Aorian'izay, raha mandeha any amin'ny tanàna hafa ianao, manandrama mijery raha misy tranombakoka satria manokana ny tsirairay.
Noho izany, ao amin'ny tanànan'ny seranan-tsambon'i Cherchell dia ho hitanao ny fahagola romanina sy grika ary ao amin'ny tanànan'ny zavatra Constantine sy sary sokitra avy amin'ny toerana arkeolojika. Na aiza na aiza misy tranombakoka ary ny fahafantarana azy ireo dia fomba tsara hanakaikezana ny kolontsaina Alzeriana.
Raha tianao ny arkeolojia sy ny tantara dia misy toerana fito nambara ho lovan'ny World Heritage: la Kasbah an'ny Alger, ny Tanànan'ny Berber an'ny Vall de M'zab, ny sisa tavela amin'ny Rovan'i Qal'aa Beni Hammad, ny tendrombohitra ny Tassili n'Anjer, miaraka amin'ireo sary hosodok'ireo lava-bato, ary rava an'i Djemila, Tipasa ary Timgad.
Ny sisa tavela amin'i Djemila dia mitondra antsika hiverina any amin'ny fisian'ny Romana ao amin'ilay faritra ary raha misafidy iray amin'ny lisitra fotsiny ianao dia ity no safidy tsara indrindra. Ireo rava dia voatahiry tsara ary miavaka manerana an'i Afrika Avaratra. Niala tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary rehefa mandeha mamaky ny arabe foana ianao dia azonao an-tsaina hoe nanao ahoana ny fiainana tany taonjato maro lasa izay. Izy io koa dia manana tranombakoka.
Etsy ankilany, raha tianao hetsika ivelany sy natiora manana vitsivitsy ianao Valan-javaboary: Chrea, Djurdjura, Ahaggar, Belezma, El Kala, Gouraya, Tassili n'Aijer, Taza ary Tlemcen. Ny sasany dia valan-javaboary amoron-tsiraka (El Kala, Gourraya, Taza), ny sasany kosa eo anelanelan'ny tendrombohitra (Belezma, Chrea, Belezma, ankoatry ny hafa), misy ihany koa ireo valan-javaboary ao amin'ny steppes (Djebel Aissa) na ao amin'ny Sahara (Tassili, l'Ahaggar) . Tsy misy koa ny tsy fahampian'ny tahiry voajanahary.
Ny fahalalana ireo toerana ireo dia midika ho fitetezam-paritra fitsangatsanganana any amin'ny masoivoho manokana na mivantana amin'ny hotely. Afaka misoratra anarana amin'ny fitsangatsanganana anaty kamio 4 x4, mandeha mamaky an'i Sahara, mitaingina soavaly mitaingina rameva. Misy faritra tsara tarehy indrindra ho an'ny mandeha an-tongotra: Hoggar, misy tendrombohitra mahafinaritra, dongom-bato misy zavakanto rock sy zavamaniry ary biby. Bibidia ny hakanton'i Algeria satria tsy firenena mandroso be akory izy io ka hoy aho hoe vao mainka mamiratra.
Raha Silamo ianao dia te-hitsidika moske satria ny Silamo no fivavahana manjaka ao amin'ny firenena. Betsaka nefa ny sasany manandanja kokoa noho ny hafa raha ny fijery ara-tantara. Ohatra, ny Moske Lehibe an'i Tiemcen, ny Moske Lehibe any Algeria ary ny Ketchaoua, izay Lova Iraisam-pirenena hoy ny UNESCO. Raha Kristiana ianao dia afaka mitsidika fiangonana katolika izay tsara tarehy satria eo amoron'ny hantsana izay mijery ny helodranon'ny renivohitra: Ry Andriambavin'i Afrika, izay nanomboka tamin'ny 1872 ary misy sary hosodoko feno mozika sy mozika.
Ahoana ny fomba hivezivezena any Algeria
Ny fomba tsara indrindra hitetezana ny firenena dia amin'ny lamasinina na fiara satria ny marina dia voafetra ihany ny safidin'ny fitaterana. Ny fiaran-dalamby dia fenitra ary mora ny vidin'ny tapakila. Toerana be olona sy misavoritaka ireo gara ka tokony hitandrina ianao, tonga aloha, manana baikon'ny fiteny ary fantaro ny fomba fiasa alohan'ny hanaovana famandrihana na fividianana.
Azonao atao manofa fiara Fa raha ny zava-misy dia nisy ny fampihorohoroana, tsy zavatra hatolotro azy izany. raha tsy tianao ny traikefa nahafinaritra. Misy masoivoho manofa fiara iraisam-pirenena toa an'i Hertz na AVIS ary afaka manofa iray ianao any amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy na avy amin'ny hotely ipetrahanao. Misy karazana fiara, kely, lehibe, kamio, fiara kely. Miankina amin'ny toerana nalehanao izany.
Farany, raha espaniola ianao dia mila visa hiditra ao Algeria. Tsy maintsy alamina mandritra ny efa-bolana eo alohan'ny datin'ny dia ataonao amin'ny alàlan'ny masoivoho sy Consulate nanomboka teo tsy misy visa navoaka any amin'ny sisintany. Tsy maintsy manana fiantohana fitsangantsanganana koa ianao. Tsy maintsy atao ny manao vaksiny saingy tsy hampijaly anao ny manana ilay ho an'ny tetanosy sy ny hépatite A ary B, ankoatry ny hafa izay mety efa anananao noho ny drafitra fanaovam-baksiny tsy maintsy atao.
Toerana mampidi-doza ve i Algeria? Mety hisy izany, satria misy sela mavitrika vondrona mpampihorohoro. Nisy ny fanafihana tamin'ny taon-dasa ary ny farany indrindra dia ny volana febroary sy aogositra tamin'ity taona 2017 ity, saingy tsy ny mpizahatany no tanjona fa ny polisy sy ny manamboninahitra. Indraindray dia nisy naka an-keriny ny vahiny, indrindra ny sisin-tany na ny atsimo, noho izany dia tsy tsara ny mandeha any amin'ny Greater South ary mankany amin'ny sisintany miaraka amin'i Nizeria, Maoritania, Libya na Mali.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Alzeria » Inona no hitsidika an'i Algeria